Myanmar Women's Affair Federation - ေဆာင္းတြင္းခိ်န္ခါ က်န္းမာေရးဂရုစိုက္စရာမ်ား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ဟူသော ရာသီဥတုသုံးမျိုးရှိသည်ကို လူတိုင်း သိပြီးဖြစ်ပါသည်။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်တစ် ရက်နေ့မှ တပေါင်းလပြည့်နေ့အထိ ကျ ရောက်သော ဆောင်းရာသီကာလအတွင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် မည်သို့ နေ ထိုင်စားသောက်ရမည်။ မည်သို့သော ရောဂါ များ ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ယင်းဖြစ်ပွားတတ် သော ရောဂါများကို မည်သို့ပြုစု၊ ကုသရ မည်ကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ရေးသား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆောင်းရာသီကာလသည် လေး လကာလကြာရှည်ပြီး ဥတုအနေဖြင့် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့မှ ပြာသိုလပြည့်နေ့အထိ နှစ်လတာကာလကို ဟေမရတု၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့ တပေါင်းလပြည့်နေ့အထိ နှစ်လတာကာလ ကို သိသိရရတု ဟုခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။
ဟေမရတုကာလဖြစ်သည့် တန် ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့မှ ပြာ သိုလပြည့်နေ့အထိ နှစ်လတာ ကာလ အတွင်း ကျန်းမာသူများ၏ ရုပ်လက္ခဏာ များမှာ ရေမငတ်ခြင်း(တစ်နည်းအားဖြင့် ရေ သောက်နည်းခြင်း)၊ ချွေးထွက်နည်းခြင်း၊ ဆီး အရောင်ဖြူပြီး ကြည်လင်၍ ဆီးသွားသည့် ပမာဏများခြင်း၊ အစားအသောက် အအိပ် အနေ နည်းခြင်း၊ ဝမ်းမှန်ခြင်း၊ အာခံတွင်းနံ့ မရှိခြင်း၊ ခေါင်းအုံခေါင်းကိုက်မဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပြီး မကျန်းမာသူများ၏ ရုပ် လက္ခဏာများမှာ ရေသောက်များခြင်း၊ ချွေး ထွက်များခြင်း၊ ဆီးအရောင်မှာ အနီ၊ အဝါ ဖြစ်၍ ဆီးသွားသည့် ပမာဏနည်းခြင်း၊ အာခံ တွင်းနံ့ထွက်ခြင်း၊ အအိပ်အနေ အစား အသောက်များခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ခေါင်းအုံ ခေါင်းကိုက် ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
ဟေမရတုကာလတွင် ကျန်းမာစေ ရန်အတွက် သတိပြုဆင်ခြင်ရမည့်အချက် များမှာ နံနက်စောစောနှင့် ညမိုးချုပ် နေဝင် ချိန်များတွင် ရေမချိုးမိရန်၊ ကျုံးရေ၊ မြောင်း ရေ၊ ကန်ရေ၊ ဆည်ရေတို့ကို မသုံးမိစေရန်၊ လေတိုက်ခံခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြည်ကြရန်နှင့် ပူ၊ ဆိမ့်၊ ဖန်၊ ပူ၊ ခါး၊ စပ် အရသာရှိသော ဆေးနှင့်အစားအစာများ၊ မစားမိစေရန် တိုု့ဖြစ်ပါသည်။
ဟေမရတုကာလတွင် ကျန်းမာစေ ရန်အတွက် ကျင့်ကြံဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များမှာ လုံခြုံနွေးထွေးစွာ နေထိုင်ရန် အချိန်ပေးနိုင်ပါက နေ့လည်၊ နေ့ခင်းတွင် ခဏတဖြုတ်အိပ်ရန်၊ အဆီအဆိမ့်နည်းသော အစားအစာများနှင့် ချို၊ ဆိမ့်၊ ဖန်၊ အေး၊ ချဉ်၊ ငန် အရသာရှိသော ဆေးနှင့်အစား အစာများကို စားပေးရန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အနေဖြင့် မန်ကျည်း၊ ကင်မွန်း၊ မုန်လာ စသည့်အသီးအရွက်များကို မကျည်းနှစ်နှင့် စပ်၍ဖြစ်စေ၊ သရက်ပြား၊ မရမ်းပြားစပ်၍ ဖြစ်စေ၊ ချဉ်ရည်ဟင်းအဖြစ် မကြာခဏ ချက်စားပေးခြင်း၊ ရှောက်သီးသုတ်၊ သံပရာ သီးသုတ်စားခြင်း၊ ရှောက်ဖျော်ရည်၊ မကျည်း ဖျော်ရည်တို့ကို သောက်ခြင်း၊ ကင်လင်းရွက်၊ မုန်လာရွက်၊ မုန်ညင်းရွက်၊ စောင်းလျားသီး၊ မရမ်းသီး၊ သံပရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ သရက်၊ စင်>ြွပမ်းသီး၊ ကြက်ပေါင်သီး စသည်တို့နှင့် အခြား အေး၊ ငန်၊ ချဉ် အရသာရှိသော အစားအစာများ စားပေးခြင်း၊ သားငါးများ အနေဖြင့် ငါးသလဲတိုး၊ ငါးနုသန်း၊ ငါးသန် ချိတ်၊ ငါးနှပ်၊ ငါးမြွေတိုး၊ ငါးဘတ်၊ ငါးမြင်း၊ ငါးလင်ပန်း၊ အသားအနေဖြင့် ဘဲသား၊ ဝက်သား၊ ငန်းသားများကို မန်ကျည်း၊ သရက်ပြား၊ မရမ်းပြား စသည်တို့နှင့်စပ်၍ ဖြစ်စေ ချက်စားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဟေမရတုကာလတွင် မှီဝဲသင့် သော ဆေးအနေဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံး ဆေး အမှတ်(၁) (သေမှပုတိက မက်လင်ချဉ် ချွဲသလိပ်ပုပ်ပျောက်ဆေး) ကို မနက်နှင့်ည တစ်နေ့ (၂) ကြိမ်နှုန်း၊ တစ်ကြိမ်လျှင် နှစ်ပဲ သားခန့် ရေနွေးဖြင့် သောက်ပေးရန်ဖြစ်ပါ သည်။
သိသိရ ရတုကာလအတွင်း ကျန်း မာစေရန်အတွက် သတိပြုဆင်ခြင်ကြရန် အချက်များမှာ နံနက်စောစောနှင့် မိုးချုပ် နေဝင်ချိန်များတွင် ရေမချိုးမိစေရန်၊ အင်း၊ အိုင်များမှ ရေများကို မသုံးမိဖို့၊ အဝတ်အစား ရေစိုဖြင့် မနေမိစေရန်၊ အအေးမခံရန်၊ အေး၊ ငန်၊ ချဉ် သောအရသာနှင့် ချို၊ ဆိမ့်၊ ဖန် သော အရသာများရှိသည့် အစားအစာများ ဝက်သား၊ ဘဲသားများ ရှောင်ရန်တို့ဖြစ်ပါ သည်။
သိသိရ ရတုကာလအတွင်း ကျန်းမာစေရန် ကျင့်ကြံဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များမှာ မိမိခန္ဓာ ကိုယ်ကိုချွေးထွက် အောင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ပြုလုပ်ဖို့၊ နံနက် စောစောနှင့် ညနေပိုင်းအချိန်များတွင် လမ်း လျှောက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့် ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းစသည့် သင့်တင့်လျောက် ပတ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ရှိ အကြောများ လျော့အောင်ပြုပြင်ပေးရန်နှင့် နွေးနွေးထွေးထွေး နေရန်၊ ပူ၊ ခါး၊ စပ်သော အစားအစာများကို စားပေးရန်တိုု့ဖြစ်ပါ သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အနေဖြင့် ကြောင် လျှာသီးကို အတို့အမြုပ်လုပ်စား၍ဖြစ်စေ၊ ချက်စား၍ဖြစ်စေ၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးကို ချက်စား၍ဖြစ်စေ၊ ခွေးတောက်ရွက်ဟင်းချို၊ ဒန့်သလွန်ရွက်ဟင်းချိုတို့ကို သောက်ပေးရန်၊ ရဲယိုရွက်ကိုပြုပ်တို့၍ဖြစ်စေ၊ ငါးခူနှင့် ချက် စား၍ဖြစ်စေ၊ အခွံပါရှောက်သီးကို ငရုတ်သီး စပ်စပ်နှင့် သုတ်၍ဖြစ်စေ၊ ဟင်းချက်၍ဖြစ်စေ စားရန်နှင့် ကြက်သဟင်း၊ ပိုးစာ၊ ဥသျှစ်၊ ပျင်းတော်သိမ်၊ ပင်စိမ်း စသည်တို့ကိုလည်း သင့်တော်သလို စားသင့်ပါသည်။ အသား အနေဖြင့် ကြက်သား၊ ဆိတ်သား၊ အမဲသား၊ ချိုးသား၊ ခါသားစသည်တို့ကို ငရုတ်သီး စပ်စပ်၊ မဆလာနိုင်နိုင်နှင့် ချက်စားရန်ဖြစ်ပါ သည်။
သိသိရ ရတုကာလအတွင်း ပူ၊ ကန်၊ ပွင့်၊ ကြေ စသည့် တိုင်းရင်းဆေးခန်း သုံးဆေးအမှတ်(၂၃) (ဆေးပုလဲကလာပ် ဆေး)ကိုဖြစ်စေ၊ တိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံး ဆေးအမှတ်(၂၅) (ပတဲမြင်းမိုရ်ကုန်းဆေး) ကိုဖြစ်စေ၊ နံနက်ည တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်၊ တစ် ကြိမ်လျှင် နှစ်ပဲသားခန့် ရေနွေးနှင့်သောက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဆောင်းရာသီတွင် ဖြစ်ပွားတတ် သော ရောဂါများမှာ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ချမ်းဖျား၊ တုန်ဖျားဖြစ်ခြင်း၊ နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝမ်းမ ချုပ်စေရန်၊ နံနက်တိုင်း ရေကိုဝအောင် သောက်ခြင်း၊ အအိပ်အထိုင် နည်းအောင်ပြု လုပ်ခြင်း၊ ဆီးသွားလိုခြင်း၊ ဝမ်းသွားလိုခြင်း တို့ကို အောင့်(ထိန်းချုပ်)မထားရန်တို့ကို သတိပြု ဆင်ခြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဝမ်းချုပ်ပါက ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း မန်ကျည်းဖျော်ရည် တစ်ခွက်သောက်ရန်၊ ဝမ်းမှန်စေရန် ကင်ပွန်း ရွက်ချဉ်ရည် သို့မဟုတ် ကန်စွန်းရွက်ကို မန်ကျည်းမှည့်နှင့် ချဉ်ဟင်းချက်စားခြင်း ပြုရ ပါမည်။ ဆေးအနေဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးခန်း သုံးဆေးအမှတ် (၉) (ဆီးဒူလာဆေး)ဖြစ်စေ၊ တိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံးဆေးအမှတ် (၁ဝ) (ဆီးရွှင်ဝမ်းနှုတ်ဆေး)ကိုဖြစ်စေ၊ ညအိပ်ယာ ဝင်မှာ နှစ်ပဲသားမှ လေးပဲသားအထိ ရေအေး နှင့် သောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ချမ်းဖျား၊ တုန်ဖျားဖြစ်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှ အအေးဓာတ်များ ပတ်ဖွဲ့ ထားပြီး အခိုးအာကာသမရရှိဘဲ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း ငုတ်လျှိုးနေသည့် အဖျားမျိုးဖြစ်သ ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အခိုးအာကာသပွင့်စေမည့် ဆေးများဖြင့် ပြုစုကုသရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းဖျား၊ တုန်ဖျားဖြစ်ခြင်းအတွက် နံနက် ဆေးအနေဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံးဆေး အမှတ် (၁၇) (သွေးဆေးနီကြီး) တစ်ပဲသား ပမာဏကို ထန်းလျက်ပြုတ်ရည်တွင် ချင်း (ဂျင်း) အနည်းငယ်ထည့်၍ အကြမ်းပန်းကန် နှစ်လုံးပမာဏခန့် သောက်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ လေ လုံသည့်နေရာတွင် အဝတ်ထူထူ ဝတ်စေ လျှက် စောင်ကိုလုံလုံခြုံစေကာ ချွေးဖြိုင် ဖြိုင်ထွက်အောင် ချွေးထုတ်ပေးရပါမည်။ (သတိပြုရန်မှာ ထွက်သောချွေးများကို အဝတ်ပါးပါးဖြင့်သုတ်ပေးပြီး မိမိချွေးဖြင့် ပြန်အအေးမမိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။) နေ့လည် ဆေးအနေဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံးဆေး အမှတ်(၂၅) (ပတဲမြင့်မိုရ်ကုန်းဆေး) တစ်ပဲ သားပမာဏကို ထန်းလျက်ပြုတ်ရည်တွင် ချင်း(ဂျင်း)အနည်းငယ်ထည့် တိုက်ပေးပြီး နှာဆေးရှူပေးခြင်း၊ ကွမ်းရွက်သတ္တုရည်ကို မျက်စဉ်းအဖြစ် ခတ်ပေးခြင်းပြုရပါမည်။ ညနေဆေးအနေဖြင့် ညနေ(၅) နာရီခန့် အချိန်တွင် တိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံးဆေး အမှတ် (၂၅) (ပတဲမြင့်မိုရ်ကုန်းဆေး) တစ်ပဲ သားပမာဏကို ကွမ်းရွက်ပြုတ်ရည်ဖြင့် သောက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်းချုပ်ပါက ညအိပ်ရာဝင် တိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံး ဆေး အမှတ် (၉) (ဆီးဒူလာဆေး) ကိုဖြစ်စေ၊ တိုင်း ရင်းဆေးခန်းသုံးဆေးအမှတ် (၁ဝ) (ဆီးရွှင် ဝမ်းနှုတ်ဆေး) ကိုဖြစ်စေ ညအိပ်ရာဝင်တွင် နှစ်ပဲသားမှ လေးပဲသားအထိ ရေအေးနှင့် သောက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
Paper reading session to mark Myanmar Women’s Day held
Super User - Friday, 14 November 2014
It was attended by MWAF Patrons Daw Ni Ni Win, Daw Khin Mi Mi and Daw Mya Theingi,
Myanmar Women's manner is Myanmar Culture held
The deputy minister presented first, second and third prizes to
Educative talk for women given
Work group for protecting and rehabilitating women of Myanmar Women's Affairs Federation
Myanmar Women’s Affairs Federation was formed on the 20th December 2003. Its mission is to promote the welfare and advancement of women in Myanmar with the aim to enable them to participate fully in the national development. It isavoluntary non- governmental organization for the advancement of women in Myanmar, women of all national races in all walks of life.
Download Link: MWAF Magazine
Copyright@ Myanmar Women's Affairs Federation